पोसाकमा कि आचरणमा गुणस्तरीयता ? – Rajdhani Daily
पोसाकमा कि आचरणमा गुणस्तरीयता ?
नेपालका तीनै सुरक्षा निकायले आफ्ना सुरक्षा पोसाकमा गुणस्तरीयता ल्याउने सार्वजनिक गरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । पोसाक आफैमा मर्यादा र अनुशासनको संकेत पनि हो । यो सुरक्षाकर्मीको विशिष्टता र विशेषताको पहिचान पनि हो । यसले विगतको इतिहास, वर्तमानको कर्म र भविष्यको आशालाई एकैसाथ समायोजित गरेको पनि हुन्छ ।
जनताले हेर त सेना आए वा सशस्त्र आए वा प्रहरी आए भनेर भन्दा उनीहरूको मन, वचन र कर्म जनताका आँखामा एकैपटक आउँछ । सुरक्षाकर्मी भन्ने बित्तिकै ओठ मात्र चलेको हुँदैन, भित्र जिब्रो फड्कारिएको हुन्छ र दिमागमा उनीहरूले गरेका कर्मको स्मरण भइरहेको हुन्छ । हेर्दा निकै सतही र बाहिरी आवरणजस्तो मात्र देखिए पनि पोसाकले स्वत्व र अस्तित्वको पनि भार वहन गरेको हुन्छ । भनिन्छ, रूपअनुसारको सार र सारअनुसारको रूप हुनुपर्छ । सरकारले आफ्ना सुरक्षकर्मीका लागि कुन गुणस्तरको पोसाक दिनुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ ।
झट्ट हेर्दा आकर्षक र प्रभाव दिने पहिलो कुरा भनेको पोसाक नै हो । त्यसपछिको हो, मुस्कानसहितको जनसेवा । पोसाकले रूप पक्ष वा आवरणको हैसियत दिलाउँछ भने मुस्कानसहितको सेवाले त्यसको सार पक्ष वा गुण । यो भित्री र बाहिरी वा सारले रूपको र रूपले सारबीचमा तादाम्यता राख्नु जरुरी हुन्छ । पोसाकमा गुणस्तरीयताका कुरा गर्दा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने आर्थिक अपारदर्शिताका कुरा पनि नछोइने भने होइनन् । यी कुराले संस्थागत आर्थिक गडबडीसँग जोडिएका गम्भीर कुरालाई इंगित पनि गर्छन् । पोसाकमा गुणस्तरीयताका कुरा सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक र संस्थागत गुणस्तरसँग पनि जोडिएर आउने गरेको हुन्छ । नेपालका तीनवटै सुरक्षा निकायमा पोसाकका कुरा उठ्दा वा उठाइँदा यी कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
यसका लागि प्राविधिक हिसाबले पोसाकको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागले केही काम त गर्ला नै । तर, त्यसको निरन्तर जाँच र अनुगमन पनि उत्तिकै जरुरी छ । सुनिएको पनि छ कि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यसका लागि तयारी पनि गरिहेको छ । यसको अर्को निकै चर्चामा आउने तर सधैं उन्मुक्ति पाउने सम्बन्धित पक्ष भनेको ठेकेदार पनि हो ।
ठेकेदार र संस्थाका हाकिमको मिलेमतोमा कमसल कपडाको खरिद तथा वितरण हुने गरेको छ । यसका लागि पहिलो कुरा भनेको यी तीनवटै संस्थाका हाकिमहरू संस्थाप्रति गौरव गर्न र आफ्ना फौजप्रति इमानदार रहन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका हाकिम कर्मचारी पनि चारपैसे लोभदेखि मुक्त हुनुपर्छ ।
Tags: पोसाकमा कि आचरणमा गुणस्तरीयता ?